Dr Erkut Sogut: “Ozil uma baahna Hal Million oo uu isbuucii qaadanayo” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Dr Erkut Sogut: “Ozil uma baahna Hal Million oo uu isbuucii qaadanayo”
Dr Erkut Sogut: “Ozil uma baahna Hal Million oo uu isbuucii qaadanayo”
Posted by: Ahmed Haaddi November 13, 2018
Muqdisho – Mesut Ozil ayaa lagu soo waramayaa in uu go’aansaday inuu iska diido dalabyada u imaanaya laacibkaan oo ku aadan in uu qaadanayo £ 1m toddobaadkii, si uu baaqi ugu sii ahaado Arsenal.
Ozil wax ka yar hal sanno ayaa ka hartay qandaraaskiisa Emirates Stadium ka hor inta uusan go’aansan inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo Gunners, laakiin waxa uu u muuqdaa in kubad sameeyahaan uu dalabyo badan oo faa’iido leh ka helay meelo kale.
Ciyaaryahankii hore ee Jarmalka ayaa soo jiitay kooxaha Asia, sida ay qortay jariirada London Evening Standard, 30-jirkan ayaa la siiyay fursad uu ku kasbado £ 50m sannadkiiba haddii uu diyaar u yahay inuu ka tago Arsenal.
Wakiilka laacibkaan Dr Erkut Sogut ayaa yiri”dalabaadyo waali ah ayaa ka yimid Asia”, laakiin Ozil ma ahan mid lacag doonayo.
Xiddiga khadka dhexe ayaa haatan ku jira xilli ciyaareedkiisii lixaad ee Waqooyiga London, isagoo afar gool iyo hal caawiye ka sameeyay 12 kulan oo Premier League ah iyo Europa League tan iyo bilowgii bishii August.
Previous: Ninka doonaya inuu da’diisa ka jaro 20 sano si uu u helo shaqo iyo lamaane cusub
Next: Maxay tahay qorshaha Mourihno uu ka damacsan yahay Matteo Darmian?